पहिलो महिला विमान चालकको मृत्यु |
पहिलो महिला विमान चालकको मृत्यु
प्रकाशित मिति :2017-05-18 15:33:42
काठमाडौ । पाकिस्तानकी पहिलो महिला व्यवसायिक विमान चाकल शुक्रिया खानुमको ८२ वर्षको उमेरमा क्यान्सरवाट मृत्यू भएको छ । अघिल्लो साता उनको लाहोर शहरमा मृत्यु भएको हो ।
सन् १९५९ मा सरकारी कजेलबाट पढाई पुरा गरे लगत्तै उनले विमान चालकको तालिम लिएर लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उनको पाइला पछ्याउन महिलालाई ३० वर्ष लाग्यो ।
जब शुक्रिया खानुमले देशको ध्वजावाहक पाकिस्तान अन्तराष्ट्रिय विमानमा काम गर्न थाले त्यसबेला महिला विमान चालकलाई व्यवसायिक विमान चलाउने अनुमति थिएन । त्यसकारण उनले विमान निर्देशकको काम उक्त विमानको तालिम केन्द्रमा स्विकारिन् । त्यहाँ उनले युवा प्रशिक्षर्थीलाई पढाउन थालिन् .
उनले मनोरञ्जनको लागि विमान चढ्न उत्सुकहरुलाई कराची फ्याईङ्ग क्लबवाट विमान पनि चलाइन् । सन् १९७० को उत्तरार्धमा जनरल जियाउल हकको सरकार आएपछि कडा कानुन आयो । लोकप्रिय टेलिभिजन प्रस्तोता डा.शाहीद समुद उनकी नातेदार हुन् र उनीसँग त्यो बेलाको अनुभव बाँडेकी थिईन् ।
शुक्रिया भन्थिन् कि जनरल जियाउलले ‘महिला पुरुषसँग विमानको ककपिटमा बसेर विमान चलाउने कुरा पचाउन सकेका थिएनन् । ’
डा. शाहीद मसुद भन्छन्, ‘जनरलले त्यो कुरा अस्विकार गरे र शुक्रियालाई पुरुषसँग विमान चलाउन रोक लगाएर उनलाई मैदानमै बसेर निर्देशकको काम गर्र्न लगाए ।’
शुक्रियालाई यो निर्णयबाट झट्का लाग्यो । ‘मेरी अन्टीले भन्नुहुन्थ्यो, ‘म यी पुरुषहरुसँग काम गर्छु । कोही मेरा विद्यार्थीहरु हुन्, कोही मेरा सहकर्मीहरु । उनीहरुसँग म धेरै समय विताउँथे, सँगै विमान चलाउन के विग्रिन्थ्यो त ? विमान परिचालिका पनि त हुन्छन् नि, उनीहरुलाई पनि रोक्छन् त ? व्यवसायिकतामा ध्यान दिनु । ’ दुईजना अरु महिलाहरु आइशा रयिबा र मलिहा समीले पनि पीआइएको विमान परीक्षा सन् १९८० मा दिएपछि यस्तै अवरोधको समना गर्नुपर्यो ।
जनरल जियाको सन् १९८९ मा मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक पीआइएले फेरि औपचारिक तालिम लिन बोलायो । ‘मैले नौ वर्षसम्म कुरे किनभने महिलाले विमान चलाउन पाउने नियम नै थिएन ।’ रयिबाले भनिन् । सन् १९९० मा सामीले पनि विमान पहिलो चोटी चलाउन थालिन् । सन् २००५ मा रयिबा यात्रुवाहक विमानको व्यवसायिक उडानको प्रथम महिला कप्तान बनिन् । एक वर्षपछि सबै उडान सदस्य र चालक महिला भएको विमान उडाइन् । यो पाकिस्तानका लागि पहिलो पटक महिलाले नेतृत्व लिएको उडान थियो ।
सन् १९८९ मा रयिबा शुक्रिया कराचीमा खानुमलाई भेट्न गएकी थिइन् । रबियालाई भेट्दा उनी खुशी भइन् र उनले भनिन्, ‘तपाई महिला भएकाले यो वा त्यो गर्र्न सक्दैनन् भनेर कसैलाई सोच्ने मौका दिनुहुँदैन, व्यवसायिकतामा केन्द्रित हुनु ।’